उज्जवल थापाको उपचारका लागि उठाइएको रकम ७ संस्थालाई वितरण - Vishwanews.com
उज्जवल थापाको उपचारका लागि उठाइएको रकम ७ संस्थालाई वितरण
काठमाडौं । विवेकशील साझाका पूर्वअध्यक्ष उज्वल थापाको उपचार गर्न सर्वसाधारणबाट रकम आह्वान गरिएको थियो । यसरी उठेको रकमबाट उनको उपचारमा खर्च गरि बचेको पैसा भने विभिन्न सात वटा संस्थालाई वितरण गरिएको छ। शनिबार उनको निजी आवासमा परिवार सदस्यले सो रकम हस्तान्तरण गरे । विवेकसिल साझा पार्टीक अनुसार उनको उपचारका लागि संसारभरबाट २,८०० मानिसले सहयोग गरेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा कम १० रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो ।
ती व्यक्तिहरूबाट रु ६७ लाख ८३ हजार ४ सय ८५ उठेको छ । उठेको रकमबाट २४ लाख २० हजार ३ सय ४९ रूपैयाँ थापाको उपचारमा खर्च भएको छ । बैंक तथा रकम स्थानान्तरण गर्न कुल १ लाख १० हजार ९ सय ३४ रूपैयाँ पैसा खर्च भएको छ । उपचार गरी बाँकी ४२ लाख ५२ हजार २ सय रूपैयाँ सात संस्थालाई बाँडिएको पार्टीले जनाएको छ । कोभिडको महामारीमा चिकित्सकीय तथा जीविकोपार्जन समस्या भोगिरहेकाहरूलाई सहयोग गरिरहेका संस्थाहरूलाई उक्त रकम प्रदान गरिएको बताइएको छ ।
यो रकम पाउने संस्थामा भोरे नेपाल, सर्लाही रु. २,५०,०००, हार्टबिट, काठमाडौं रु २,००,०००, मधेश ह्युमन राइट्स होम, कपिलवस्तु रु। २,०२,२०१.७२, नेपाल क्रिटिकल केयर डेभलपमेन्ट फाउन्डेसन, काठमाडौँ रु. ५,००,०००, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, काठमाडौँ रु। १५,००,०००, ओडा फाउन्डेसन, कालिकोट रु. १०,००,००० र सानो पाइला, वीरगन्ज रु. ६,००,००० छन । यो रकम खर्च भएसँगै यसको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक बताइएको छ । थापाको उपचारका क्रममा १८ जेठमा निधन भएको छ ।